Faahfaahin duqeyn ka dhacday Koonfurta Mudug – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAFaahfaahin duqeyn ka dhacday Koonfurta Mudug
Faahfaahin duqeyn ka dhacday Koonfurta Mudug
November 20, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Faahfaahin duqeyn ka dhacday Koonfurta Mudug
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan diyaarado duqeeyey degaano hoostaga degaanka Caad ee degmada Xarardheere koofurta gobolka Mudug.
Duqeynta ayaa ka dhacday degaanka Maamiye shalay 5:00 galabnimo, waxaana la sheegay in ku dhawaad 6 Madfac ay diyaarado ku dhufteen labo saldhig oo ay leeyihiin Ururka Al-Shabaab.
Sidda Warqaat.Com u xaqiijiyeen Mas’uuliyiinta gobolka Mudug Duqeynta ayaa sii socotay ilaa xalay 8:00PM , waxaana sidoo kale duqeynta lala beegsaday gaadiid dagaal oo ku sugnaa degaanka Caad.
Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo Khasaaraha soo gaaray Ciidanka Al-Shabaab iyo waliba dadka Shacab ah ,maadaama duqeynta ay socotay Waqti dheer.
Wali ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo ku aadan duqeynta ka dhacday degaanka Maamiye.
Bishii hore October ayey aheyd markii diyaarado duqeeyeen kolonyo gaadiid waday ciidanka Al-Shabaab, duqeyntaas oo Alshabaab kasoo gaaray khasaare badan, waxaana ku dhintay dad ka badan 60 askari.
AKHRISO: Mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Hiiraan oo xilka laga qaaday
Maxay tahay Sababta loo fasaxay Shaqaallaha dowladda?
651,031 total views, 5,347 views today
651,031 total views, 5,347 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
650,905 total views, 5,350 views today
650,905 total views, 5,350 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
650,934 total views, 5,346 views today
650,934 total views, 5,346 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
650,995 total views, 5,349 views today
650,995 total views, 5,349 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
651,056 total views, 5,350 views today
651,056 total views, 5,350 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]